4C, 4A, 4B & Karazana 3 Curls & Modely ho an'ny Volo mainty hoditra?
Ny fahasamihafan'ny karazana 4 sy 3A, 3B na 3C?
Ny roa voalohany volo manodina volo Ho an'ireo vehivavy manana loko dia manana fitoviana, fahasamihafana ary anton-javatra iombonana. Ohatra, ireo izay manana karazana 3, toa hita fa mahatsiravina rehefa mando. Saingy raha vao manomboka maina dia mivadika haingana any amin'ny toerany.
Ireo manana tontolon'ny hoditra 4a 4b sy 4c dia manana ny sasany amin'ireo karazam-borona tena miavaka sy tsara tarehy! Na izany aza, io teboka io dia iray amin'ireo saro-takarina sy sarotra indrindra hikarakarana azy noho ny lozam-pahamendrehana mivaingana.
Ny karazana 4 natoraly dia hijanona ho malefaka rehefa marefo izy ary manana kofehy marevaka na volavola rehefa maina. Tiako ny karazana volom-bolo isan-karazany, ary faly aho fa maro kokoa ny vehivavy manomboka manangom-bolo ny volony.
Hizara aminareo aho ny sasany amin'ireo fahasamihafana manan-danja eo amin'ny tontolon'ny volo samihafa sy toro-hevitra vitsivitsy mba hikarakarana ny volonao.
Ny kavina na ny bobongolo dia bozaka maingoka kely fotsiny izay misy ny diamondra ao amin'ny fitongilana dia metimetatra vitsivitsy monja. Ny tanjoko amin'ity lahatsoratra ity dia ny hanampy anao hianatra ny zava-drehetra azonao atao mba hahitana ny fomba tsara indrindra hitombo sy hihazona lava, matevina, ary lohan'ny volo mahasalama na inona na inona teboka misy anao.
1 Inona ny karazana volo 3?
5 INONA NO FOTSARAN'NY HAFA 4?
9 Ahoana ny fikarakarana?
9.1 Hair Extensions ny olombelona
9.2 FAHAZARANA FOTSINY
9.4 FANAMARIHANA & FITANDREMANA
9.5 LOC fomba
Inona ny karazana volo 3?
Ireo izay manana endrika 3 ny volony dia manana vatana betsaka, manondro ary mamirapiratra eo amin'ny volony. Ny orona dia avo lamandy. Ny lustre dia manondro ny fomba fisainan'ny hazavana avy amin'ny volo. Ny volo matetika dia mora ny manamboatra, manipika ary manitsy. Vola madinika no ilaina hamarino ireo curls. Hiala ny fahasamihafana eo amin'ny 3A, 3B & 3C.
Ireo izay manana 3a volo Aoka ho azo atao ny modely loosest. Ny zavatra rehetra manimba noho ny 3A dia hiditra amin'ny sokajy anankiroa. Ireo izay manana ny volo 2a-2c dia hanana onja fa tsy mitongilana. Ny karazana volo voajanahary 3a dia matetika mamirapiratra ho azy io, izay midika fa manana loko avo izy.
Ny volo volo amin'ny 3a dia tsy mamerovero mofomamy be loatra, menaka, miala ao anaty kodiarana na vokatra marefo amin'ny ankapobeny satria izany dia midina any amin'ny volony ary mampangetaheta azy fa tsy manala baraka. Ity tora-bolo volom-borona ity dia tsara indrindra amin'ny fivoahan'ny rano mifototra amin'ny rano.
Ireto akofa ireto dia manana fefy feno barrel feno. Satria ny volom-bolo dia mikorontana tsikelikely ao anaty endrika "S" noho ny lanjan'ny volo, ka mahatonga azy ho somary matroka kokoa noho ny manala baraka. Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fampiasana ny vokatra diso ao amin'ny volo anao dia ny mijery ireo zavatra entina. Raha ny ingrony voalohany 1-3 dia solika mineraly na solika, dia mihoatra noho ny azo inoana, ny vokatra dia ny manosotra na ny fery amin'ny volonao voajanahary.
Avy amin'ny traikefako amin'ny maha-mpitaingin-tsoavaly voa-janahary azy, hitako fa ity loko mihodinkodina ity dia mipaka any amin'ireo Espaniola.
Mba hamaritana ireo fantsona ireo dia manasa tsotra fotsiny ary mandehandeha miaraka amin'ny fantson-jiro mafana amin'ny asa tsara indrindra. Aorian'izay dia avela ho maina ny volo.
sary credit IG: taty_froever
Ireo izay manana 3b volo manana toetra mitovy amin'ny volo 3a. Io loko volom-bolo io koa dia miezaka ny ho ambony amin'ny lolom-bolo amin'ny vatany ary manondro ny volony. Ny lamosin'ny haavo 3b dia somary mihamahavaha sy kely kokoa noho ny an'ny 3a. Ny barrel ny curl dia mitovy amin'ny an'ny marika Crayola lehibe.
Ny volo 3b dia ahafahanao manomboka mahita volo sy marefo ao anaty tabilao. Ireo izay manana tarehimarika voajanahary 3b dia mety ilàna fampiasana fialan-tsasatra sy fanangon-java-manitra sasany mba hitazonana ny frizz amin'ny bay. Na izany aza, dia mbola tsotra sy tsotra ny hamaritana ny volon'olona 3b.
Ny fanasana sy ny fialan-tsasatra dia mampivelatra ary misy fomba fanao mahazatra ho an'ireo izay manana endrika 3b. Raha ity no volonao dia ny fihenanao ny volo, ny famaritana marim-pototra kokoa. Ny vokatra lehibe ampiasaina amin'io karazana volo io dia mitovy amin'ny an'ny 3A. Ny vokatra izay manana glycerine ao aminy dia miasa tsara toy ny solika mifototra amin'ny rano ary manome famaritana ambony nefa tsy mandanja ny volony.
Na dia misy olona na foko aza afaka manana volo volo 3b, izay matetika no hita ao amin'ny olon-tsotra na biracial. Ny olona mainty hoditra na afrikana amerikana mifangaro amin'ny foko hafa izay matetika amin'ny volom-bolo dia matetika mitambolimbolina. Na izany aza, tsy voatery ho sarobidy ianao raha manana modely 3B. Ny fahandroana sy ny fialan-tsasatra dia tena mahazatra sy malaza amin'ireo izay manana volo 3B.
sary credit OG: @naturalhairobsessed_
3c volo dia manana endri-javatra miavaka izay tsy misy 3a sy 3b. Ny volon'ny 3b dia maniry fa tsy midina. Ny dikany dia hanomboka hitombo avy hatrany eo amin'ny làlan'ny volo izy, avy eo rehefa miha-lava ny volony ary manana lanjany izany, dia hanomboka ny famoronana endrika boribory atao hoe curly fro.
Corbin Bleu dia ohatra tsara dia tsara amin'ity tora-kazo ity. 3c dia mitaky fifangaroan-tsakafo eo amin'ny tsiranoka sy ny vokatra azo avy amin'ny rano. Ity dia vokatra feno fitiavana. Ny ankamaroan'ireo mpanjifako manana 3c ny volom-bolo dia afaka mampiasa faran'izay vokatra.
Fomba fifaliana eo amin'ny loos marevaka sy matevina matevina izany. Ity volo ity dia afaka manalefaka, ary ny vokatra entina amin'ny volo dia ilaina mba hamaritana ny fehiloha ary hitazona ny frizz raha kely indrindra.
Ireo izay manana volo 3c dia hanomboka hanasa kely kokoa sy handehanana ary hampiditra tsikelikely ny fahazarana. Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny famaritana ny curl 3c dia mihodinkodina toy ny mandro ary mandany fotoana bebe kokoa sy vokatra.
Ny fantsom-bolo lehibe mamaritra ny volo 3c dia ny borosy Denman. Misy karazam-bolo maro hafa mamaritra borosy eny an-tsena mba hisafidy amin'izao fotoana izao.
Vehivavy maro no manana ny volo 3c dia heverina fa manana ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny zava-drehetra rehefa tonga amin'ny density sy ny hateviny. Ny dity dia midika hoe firy ny volon-koditra anananao sy ny halalin-tsofina mikasika ny halehibiazin'ny volo tsirairay ary ny mamorona lohan'ny volo voajanahary manontolo!
sary credit ig @simplyshumba
INONA NO FOTSARAN'NY HAFA 4?
Hello, ny karazana XnUMX Natural divas! Raha nataonao tamin'ity lahatsoratra ity ianao, dia mety hitady ny zava-drehetra amin'ny karazana 4 ianao. Eny, efa nafeninay ianareo. Ity toro-làlana farany momba ny karazana 4 Hair ity dia mandrakitra ny zava-drehetra momba ny fomba hamaritana raha manana ny volo 4 ianao mba hikarakarana ny volonao amin'ny fiarovana. Andao isika hitsambikina.
Ny endriky ny volo 4 dia antsoina hoe nappy or Kinky, fa raha ny tena izy, ity no karazana haingon-tsoroka indrindra. Ny fehiloha dia manjary mafy loatra fa ny mpitsabo haingam-pandeha no manondro azy io toy ny fandeferana. Mitombo ny volom-bolo voajanahary. Izany dia mitaky ny vokatra sy ny fanodinkodinana maro mba hahatonga azy hihantona. Ny karazana 4 natoraly dia malefaka sy malefaka. Manana fintana kely izy miaraka amin'ny sakana kely raha tsy voafaritra amin'ny endrika ny volo. Ny karazana 4 voajanahary dia afaka mamaritra azy io ary tiany ny fahamendrehana. Fantaro bebe kokoa Afro volo sy ny fironana.
4A volo dia iray amin'ireo endrika telo amin'ny endrika 4. Ity karazana volom-borona ity dia mamorona kirarilahitra-manjelanjelatra toy ny kodiarana na kofehy kely. Ity famaritana ity dia maneho amin'ny alalan'ny fanamafisana araka ny tokony ho izy. Ny ankizivavy izay tafiditra ato amin'ity sokajy ity dia mety manana lamin'olona iray hafa. Fa ny 4a dia ny maro an'isa.
Ny volo 4a dia manana fefy na kofehy kely. Ny haben'ny volombava dia mety ho an'ny pensilihazo rehefa fenoina tanteraka. Ity lozam-pifandraisana ity dia mahomby amin'ny fanonganam-bolo, fanindrontsitra, bantu, ary maro hafa.
Na dia azo atao aza ny manasa sy mandehandeha miaraka amin'ity sehatra ity, ny ankamaroan'ny vehivavy dia misafidy ny tsy hanao izany fomba izany noho ny fihenan'ny rano. Noho ny maha-malefaka ny volon'ny 4a dia mihena ny fihenan-drivotra ary tsy maneho tsara ny halavany lava fa tsy mitongilana, dia fomba iray izany. Ny volo 4a dia tsara amin'ny vokatra azo avy amin'ny glycerine. Miankina amin'ny porosity ny volo volo, mety mila krismasy mahery kokoa ianao mba hamehy amin'ny fahamendrehana.
sary trosa @tropicurlie ig
Raha toa ianao ka sarotra ny mamaritra raha toa ny volonao S-endrika boribory na z-curl mafy dia mety ho anao 4B, fantatra koa amin'ny hoe eo antenatenany. Ity karazana volo ity dia misy fifangaroan-tsôkôlina tena izy-kiraly na z-curles.
Ny volo 4b dia matetika kokoa kokoa noho ny 4C volo ary mety hikolokolo kely kokoa ary mijanona ela be mihoatra noho ny volo 4C. Ny diva misy ny volo 4b dia manana volo matevina amin'ny endriky ny landihazo raha tsy voafaritra. Mitaky ezaka bebe kokoa ny fanaovana ny bozaka.
Ity volo ity dia misy fifangaroana amin'ny kofehy sy ringlet Ny ankamaroan'ny vehivavy 4b sy ny endriny ary maneho ny volony amin'ny fomba rehetra. Ny mahazatra 4b dia mahazatra sy mora vaky ary mitaky fahamendrehana maharitra.
Ny fomba fanodinkodinana ambany dia fomba lehibe hitombo sy hihazonana ny halavany. MNHE Collection, ary koa ny Afro Kinky Collection, dia manolotra fanitarana sy clip-ins izay mahavariana mahatalanjona miaraka amin'ity lamosina ity.
4C volo dia tena fenoina ary mitovy amin'ny 4b, saingy ity karazana volo ity dia tsy dia manana famaritana vitsy loatra ary mahatsara ny haavon'ny fihenan'ny tendance. Ny tongo-bolo dia tena mafy tokoa ny fifamendrehana. Ny olona sasany dia milaza fa ny volo 4c dia manana lamina, saingy tsy mety izany. Ny volon'ny volo dia tsy manondro marika maranitra ary mamerina miverina fa tsy mikorontana fotsiny. Saingy mbola marefo! Ohatra, misy olona manana volo 4c dia afaka manana volo volo 12 rehefa tapitra, fa mety ho hita fotsiny fa ny 3-4 santimetatra lavalava amin'ny fisasana voajanahary sy ny fanjakana.
Ny ankamaroan'ny 4c dia tsy tia ny mitrakotra ary mandeha. Ny fomba malaza indrindra amin'ny fomba hanamboarana ny volon'ny 4c dia miaraka amin'ny mason-tsivana mivoaka sy matevina rehefa maneho lava fohy kokoa izy ireo ary mitazona ny volom-bavany mivelatra sy azo tanterahina. Ny singa boribory mafy dia mifangaro tsara sy malefaka ary manify. Ny volo 4C dia matetika manana porosity avo lenta, mahatonga azy ho mora entina amin'ny fahamendrehana fa mora toy izany koa ny mamoy izany. Ny vokatra azo avy amin'ny solika dia miasa tsara mba hamehezana ny fahamendrehana ary tsara ho an'ny fanodikodinam-bika. Jereo ny blaoginay momba ny fomba LOC! MNHE Clip clip 4C Ins dia azo antoka fa mahatalanjona raha izy ireo no natao mba hitovy tanteraka amin'ny tontolonao.
Ahoana ny fikarakarana?
Hair Extensions ny olombelona
Ianao dia afaka mampiasa ihany koa - afro crochet hair Ka noho izany dia azonao atao ny manamboatra ny volonao voajanahary ho toy ny fiarovan-doha na hametraka azy ao anaty pen-pen na ny patsinay Our Afro kinky volo volo dia fomba tsara hanampiana volombava sy lava ny volonao Afro na mividy kinky volo.
kinky horonantsary mivantana horonantsary
Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy mikasika ny fomba hitantanana ny volo 4 ny endrikareo mba hihazonana azy ho maina, salama ary hitombo.
Ianao dia tokony hampiasa maina-menaka isan'andro mba hamelomana indray ny curlso. Ho mora kokoa ihany koa ny mitantana haingana haingana amin'ny maraina. Ampiasao ny vokatra fanoloran-kevitra omena etsy ambony mba hamoronana fomba tianao.
Ireo vokatra ireo dia tena manampy amin'ny fihazonana 4C maina tsy misy fananganana. Ireo vokatra ireo koa dia mikendry ny hijanona ny volo 4C mora sy mora.
Sunny Isle Jamaican Black Castor Extra Dark
Ny Cantu Shea ronono dia miala amin'ny fikarakarana manamboatra Cream
FANAMARIHANA & FITANDREMANA
Miankina amin'ny maha-mavitrika anao, mety ho hitanao fa ny volo 4 anao dia mitaky ny hanasana ny herinandro rehetra 1-2.
Ampiasao ny mpangalatra amin'ny volon'ny volo alohan'ny hanasana ny volonao hivoaka ny kibonao, tsy misy mandroso. Ho gaga ianao amin'izay mety ho azonao atao amin'ny volo.
Ampiasao ny fiaraha-misakafo rehefa avy nandroaka ny mpanafika anao. Mifantoha amin'ny hodi-doha mba hanafoanana ny fananganana.
Ampiasao ny shampoo manadio. Iray amin'ireo fahavononanay ny Shea Moisture Jamaican Shampoo Oil Castor. Ity shampoo dia manadio tsy manala ny volony.
Manaova fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra. Avelao hipetraka ao anaty volonao ny 15 minitra eo ambanin'ny cap, na ao anaty paompy mba hahazoana vokatra tsara indrindra.
Inona no mampiavaka ny "Method 4 LOC Method" noho ny fomba mahazatra LOC? Ny dingana mitovy dia mitovy. Na izany aza, ny vokatra ampiasaina amin'ny karazana 4 dia tokony ho ny vokatra azo avy amin'ny solika.
Ny fialan-tsasatrao dia tokony ho solon'ny solika mifototra amin'ny alàlan'ny solika, ny solika tokony ho solika solika na menaka voanio, ary ho an'ny crème styling mampiasa iray amin'ny soso-kevitra etsy ambony.
Seza na satin, vehivavy! Tazomy ireo tranainy tsara tarehy amin'ny alina amin'ny alàlan'ny mofomamy na bonnet. Raha manam-potoana ianao, dia azonao atao ny manodinkodina ny volonao alohan'ny hatory mba hanamboarana ny volonao amin'ny ampitson'iny.
Tafita amin'ny Flat Flat natoraly - Ity no andriamanibavintsika ankafizintsika indrindra. Ny tsara indrindra ho an'ny raharaham-barotra, ny fisehoan-javatra manokana na ny volo tsy misy volo-atao ho an'ny herinandro. Ataovy azo antoka koa ny fampiasana anay Ny volo mahitsin-tava mahitsy indrindra dia manampy fanampiny lava.
Crochet Braids - Vetivety dia lasa karazana fiarovan-tena malaza indrindra ny fanalanao ny volonao tsy misy lakaoly na perla. miaraka kofehy kofehy, Afaka mampiasa volo toy ny coarse yaki crochet volo for styling. Ny kofehy kofehy dia tena tsotra, ary afaka mijery lesona lehibe momba izany ianao eto.
Tena manimba ny volonao !?
Ahoana no hahatonga azy ho voajanahary voajanahary?
Ny Marina Momba ny Volo Menatra Afro
Mampitombo ny volonao
Ahoana no hanaovana mpanamboatra sy mpanamboatra?
Kinky Straight Perücke
Fikisahana tsy ho ela
naoty 4.67 avy tany 5
naoty 4.74 avy tany 5
naoty 4.63 avy tany 5
naoty 4.70 avy tany 5
naoty 4.83 avy tany 5